Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Mourinho, Balotelli, Pogba, Kessie, Martial, Luis Suarez
HomeWarka Xiisaha LehWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Mourinho, Balotelli, Pogba, Kessie, Martial, Luis Suarez
January 19, 2022 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Tababaraha kooxda Roma Jose Mourinho oo 58 jir ah ayaa sheegay in ay ka go’an tahay kooxda isla markaana uu iska fogeeyay shaqada Everton kadib markii uu ku soo baxay musharaxnimada badalka Rafael Benitez. (Sky Sports)
Everton ayaa wareysi la yeelan doonta Frank Lampard iyo Wayne Rooney si ay u helaan booska tababaraha ee ka banaan Goodison Park. (Telegraph )
Weeraryahanka Atletico Madrid iyo xulka Uruguay Luis Suarez, oo 34 jir ah, ayaa xiiseynaya inuu dib ula midoobo saaxiibkiisii ​​hore ee Liverpool Steven Gerrard ee Aston Villa . (Gerard Romero)
Newcastle ayaa wadahadalo kula jirta Bayer Leverkusen si ay uga heshiiyaan daafaca bidix ee Netherlands U21 Mitchel Bakker, 21. (DailyMail).
Newcastle ayaa ka fiirsaneysa inay lasoo saxiixato Adana Demirspor iyo weeraryahanka Italy Mario Balotelli, oo 31 jir ah, sida uu sheegay madaxweynaha kooxda Turkiga Murat Sancak. (Dailystar)
Paris St-Germain ayaa wadahadalo kula jirta xiddiga khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba oo 28 jir ah iyo 25 jirka khadka dhexe ee Ivory Coast Franck Kessie, kaasoo u ciyaara AC Milan. Dhaqdhaqaaqyada ayaa sidoo kale looga dan leeyahay in lagu qanciyo weeraryahanka France Kylian Mbappe, oo 23 jir ah, inuu sii joogo kooxda xilli ay xiiseynayaan Real Madrid . (ESPN)
Si kastaba ha ahaatee, Pogba ayaa u sheegay Manchester United inuu doonayo inuu ku biiro Real Madrid marka uu qandaraaskiisu dhaco dhamaadka xilli ciyaareedkan. (Dailystar)
Juventus ayaa wadahadalo la qaadatay weeraryahanka France iyo Manchester United Anthony Martial laakiin kooxda Serie A ayaan wali la xiriirin kooxda Old Trafford ka dhisan si ay ula soo wareegto 26 jirkaan. (Goal)
Arsenal ayaa rajo wanaagsan ka heshay inay la soo wareegto xiddiga khadka dhexe ee Brazil iyo Juventus Arthur Melo, oo 25 jir ah, iyadoo kooxda reer Talyaani ay wadahadalo kula jirto 24 jirka khadka dhexe ee Lyon Bruno Guimaraes si uu beddel ugu noqdo. (Sun)
Juventus ayaa sidoo kale la xiriirtay xiddiga khadka dhexe ee Switzerland iyo kooxda Borussia Monchengladbach Denis Zakaria, oo 25 jir ah, si uu u buuxiyo booska Arthur. (90min)
Si kastaba ha ahaatee, Arsenal ayaa dhabar jab kala kulantay baacsiga ay ugu jirto weeraryahanka Fiorentina Dusan Vlahovic, oo 21 jir ah, iyadoo ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Serbia uu sheegay inuu doonayo kaliya ku biirista Juventus . (Dailymail)
Tottenham ayaa wali isku dayaysa in ay la soo saxiixato xiddiga garabka uga ciyaara Spain ee Adama Traore bisha January inkasta oo maamulaha Wolves Bruno Lage uu ku riixayo in uu sii haysto 25 jirka ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan. (Fabrizio Romano)
Spurs ayaa sidoo kale isku dayaysa inay iska iibiso ciyaartoy sida 25-jirka khadka dhexe ee France Tanguy Ndombele, daafaca dambeedka midig ee Republic of Ireland Matt Doherty, 30 sano jir ah, khadka dhexe ee England Dele Alli, 25 sano jir ah , iyo 24 jirka garabka uga ciyaara Netherlands Steven Bergwijn. (Fabrizio Romano)
Brentford ayaa tartan kala kulmi karta Leicester iyo Newcastle dalabkooda ku aadan saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Denmark Christian Eriksen, oo 29 jir ah.
Weeraryahanka Croatia Ivan Perisic kama tagi doono Inter Milan bisha Janaayo inkastoo lala xiriirinayo Chelsea . 32 jirkaan ayaa qandaraaskiisu dhacayaa bisha June laakiin kooxda Serie A ayaa ka shaqeyneysa inay qandaraaska u kordhiso. (Fabrizio Romano)
Inter ayaa la socota xaalada 28 jirka Paulo Dybala ee Juventus iyadoo weeraryahanka Argentina uu qandaraaskiisu dhacayo xagaagan. (Gazzetto dello Sport)
Kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich ayaa hogaaminaya tartanka loogu jiro saxiixa daafaca dhexe ee kooxda chelsea ee Andreas Christensen iyada oo 25 jirkan daafaca uga ciyaara Denmark uu diiday dalabyo uga yimid kooxaha Ingiriiska isaga oo ixtiraamaya Blues. (Fabrizio Romano)
Barcelona ayaa sidoo kale isku dayaysa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka reer Sweden Alexander Isak, oo 22 jir ah, kana tirsan Real Sociedad haddii ay ku guul darreysato saxiixa weeraryahanka Borussia Dortmund ee Norway Erling Braut Haaland, 21. (90min).
Christian Benteke, oo 31 jir ah, ayaan wax niyad ah u haynin inuu ka tago Crystal Palace bishaan Janaayo, inkastoo Burnley ay u aragtay weeraryahanka Belgium bedelka Chris Wood. (Evening Standard)
Liverpool ayaa isha ku heysa inay 5 milyan ginni ugu dhaqaaqdo Fulham ciyaaryahankii hore ee England ee 18 jirada Fabio Carvalho, iyadoo West Ham , Leeds iyo Porto ay sidoo kale xiiseynayaan 19 jirkaan, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo xagaagan. (Thesun)
Arsenal , Tottenham iyo Leeds ayaa xiiseynaya daafaca garabka bidix ee Ingariiska iyo Middlesbrough Djed Spence, oo 21 jir ah, kaasoo haatan amaah kula jooga Nottingham Forest . (Sky Sports)
Fenerbahce iyo daafaca dhexe ee Hungary Attila Szalai ayaa xiiseynaya West Ham iyo Newcastle , iyadoo AC Milan ay sidoo kale bartilmaameedsaneyso 23 jirkaan, kaasoo lagu qiimeeyo 16.7 milyan ginni. (Sky Sports)
Daafaca reer Spain ee Arsenal Pablo Mari, oo 28 jir ah, ayaa ku dhow inuu amaah ugu biiro Udinese . (Evening Standard)
Wakiilka daafaca dambeedka midig ee Mareykanka Sergino Dest ayaa sheegay in 21-sano jirkaan uu ku faraxsan yahay Barcelona iyadoo ay jiraan warar xan ah oo la xiriirinaya Chelsea iyo Bayern Munich . (Mundo Deportivo)
Watford ayaa qarka u saaran inay lasoo saxiixato garabka Bordeaux Samuel Kalu ka dib markii ay ogolaatay qiimo dhan 3.5 milyan ginni 24 jirka reer Nigeria. (Sports)